Hugawng kachin(Jinghpaw,singpo,jingphosu): May 2014
Kachin Democratic Party, Duwa Gum Grawng Awng Hkam American Mungdan Washington DC de sadu
at 5/31/2014 03:52:00 AM
Hugawng Media hte hkrum shaga yu ai lam Daw( 1)
Click on link++++++
9 June, 2014 ( Monday ) ya shani hkring 10:00 am hta, Jinghpaw Wunpawng Mungdan kaw majan byin taw nga ai3ning hpring ai nhtoi hta KRC hku nna woi awn na
at 5/29/2014 01:58:00 AM
Krc Shiga's status update.
9 June, 2014 ( Monday ) ya shani hkring 10:00 am hta, Jinghpaw Wunpawng Mungdan kaw majan byin taw nga ai3ning hpring ai nhtoi hta KRC hku nna woi awn let Malaysia kaw nga ai Myanmar Embassy shawng kaw ndai majan hpe ning hkap ai shawa ngun madun ai lamang hpe galaw sa wa na ga ai. Ndai lamang kaw anhte wunpawng myusha ni sha n-ga, Malaysia kaw nga ai myen mung bawsang myu lahkung rai nga ai ( karenni, Karen, Chin, Mon, Arakan, Shan) yawng jawm hpaw da ai Coallition of Burma Ethnics,Malaysia (COBEM) ni yawng mung shang lawm na re ga ai. Shing re ai majaw ndai lamang hpe anhte Jinhpaw Wunpawng Myusha ni yawng ah lu sha shang lawm ga ngu hkungga let saw lajin dat ga ai. Dai shani hta hpun na matu ( T-shirt ) hpe ma lajang da ga ai. Kata lam (detail planning) ni hpe ma bai shana wa na ga ai. Yawng hpe grai chyeju kaba sai.
at 5/28/2014 11:13:00 AM
Seng Raw Tsumhpawng
June 09 Monday 10:00am hta Congressman office, Washington DC de Texas kaw na Wunpawng Myusha ni kadai ni lu shang lawm na kun? N dai Meeting hta Texas kaw na myu sha ni nan, Signature campaign hpe sa sa ra ai majaw. Chye ju hte lu shang lawm ai ni nga yang shana wa marit.
at 5/28/2014 10:14:00 AM
By Duwa Kachin
ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေး အတွက် အမျိုးသား ဒီမုိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်က ကြိုးစား နေတာ တွေ့ရပါတယ်။ ဒီအထဲမှာ ဒေါ်စု သမ္မတ ဖြစ်ရေး မဖြစ်ရေး ထက် ပြည်သူက ရွေးကောက်တင်မြောက်တဲ့ သမ္မတ အစစ်အမှန် နေရာရရေး က ပိုအရေးကြီးတာပါ။
တုိုင်းရင်းသား လက်နက်ကုိုင်အဖွဲ့ တွေ တောင်းဆုိုနေတာလဲ အဲဒီ စနစ် ပါပဲ။ ဒါပေမယ့် လူနည်းစု အစုိုးရက တုိုင်းရင်းသား ဒေသ တွေပါ မကျန် စီမံကွပ်ကဲ နေတဲ့ စနစ် ကုို တော့ တုိုင်းရင်းသားတွေက လုံးဝ ကြိုက်တာ မဟုတ်ပါ။
အမျိုးသား ဒီမုိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် အနေနဲ့လဲ ဒီအချက်ကုိုတော့ မမေ့ထားသင့်ပေ။
လက်နက် နဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး ဆုိုတာ ထက် ပုိုအရေးကြီးတာ စနစ် နဲ့ ငြိမ်ချမ်းရေး ပါ။ စနစ် မပြောင်းပဲ လက်နက်စွန့်လုို့ မရ။ လက်နက် စွန့်ဖုို့ စနစ် အရင်ပြင်ရမယ်။ ဒါက လောက ငြိမ်းချမ်းရေး နိယာမ ဖြစ်ပါတယ်။
အမျိုးသား ဒီမုိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်က လူပုဂ္ဂိုလ် တစ်ယောက် ဖြစ်ဖြစ်၊ ဒေါ်စု ဖြစ်ဖြစ် သမ္မတ ဖြစ်လာရင် အရင်ဆုံး လုပ်ရမည့် တာဝန်သည် စနစ်ပြောင်းဖုို့ ဖြစ်ပါတယ်။ လူပြောင်းဖုို့ မဟုတ်။ အခု လက်ရှိ စနစ် အရ ဆုိုရင်တော့ ဘယ်လုို ပုဂ္ဂိုလ်မျိုး သမ္မတ ဖြစ်လာလဲ ဘာမှ ထူးခြားမှာ မဟုတ်ပါ။
စနစ် ဆုိုတဲ့ နေရာမှာ....
(၁) ဗဟိုချုပ်ကုိုင်မှု စနစ်ကုို ပြောင်းပြန်လှန်ပစ်ဖုို့ ဖြစ်ပါတယ်။ (Top-down to Bottom-up). အဲဒါမှ လှိုက်လျော ညီထွေတဲ့ အစုိုးရ တစ်ရပ် ဖြစ်လာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
(၂) အီးဂါးဝါးမန့် (Electronic-Government) အလျှင်အမြန် ဖြစ်လာဖုို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ၀န်ထမ်းတွေရဲ့ အကျင့်ပျက်ချစားမှု ကုို ဒီနည်းနဲ့ ကို်င်သွယ်မှာ ဖြစ်တယ်။ လူတုိုင်း အစုိုးရ ရုံးသွားစရာ မလုိုတဲ့ စနစ် ဖြစ်လာတဲ့ အခါ ၀န်ထမ်းတွေကုို လတ်ထုိုးမှု လျှော့ချ နုိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ လုံးဝ မရှိတော့ဘူးလုို့ တော့ မပြောလုိုပါ။ အတော်အသင့် လျှော့ချ နုိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
(၃) တုိုင်းရင်းသား အားလုံးရဲ့ မူလဇာတိဂုဏ် ကုို လေးစားဖုို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်လူမျိုး မဆုို ကုိုယ့် ယဉ်ကျေးမှု နဲ့ ဘာသာအယူဝါဒ ကုို တန်ဖုိုးထားတတ်ကြပါတယ်။ မကူညီချင်နေ မနှောက်ယှက်ဖုို့က အင်မတန် အရေးကြီးပါတယ်။ ကုိုယ့်လူမျိုးရဲ့ တန်ဖုိုးများ လူမျိုးခြား တမျိုးမျိုးရဲ့ ၀ါးမျိုခြင်း ဆုိုတဲ့ စုိုးရိမ်မှုဟာ လက်နက်ကုိုင် တော်လှန်ဖုို့လုံလောက်တဲ့ ခံစားချက် ဖြစ်ပါတယ်။
(၄) တုိုင်းရင်းသား များရဲ့ ယဉ်ကျေးမှု၊ စာပေ နဲ့ လွတ်လပ်စွာ ရပ်တည်ခွင့် ကုို မတားဆီး ရပါ။ လက်ရှိကမ္ဘာမှာ နီယုိုလက်ဘရာလီဇမ် ဖြစ်ထွန်းလာတာ နဲ့ အမျှ ဘယ်သူမပြု မိမိမှု ဆုိုသလုို ခေတ်ရေစီးကြောင်းကုို လူငယ်တွေ လုိုက်သွားတတ်ကြပါတယ်။ ဒီတော့ လူကြီးတုိုင်းရဲ့ အမြင်မှာ ကုိုယ့် ဇာတိအစစ်အမှန် ပျောက်ကွယ်တော့မလား ဆုိုတဲ့ စုိုးရိမ်မှုမျိုး ရှိလာတယ်။ ဒီမှာ နီးစပ်ရာ လူများစု ကုို အပစ်တင် တတ်ကြပါတယ်။ ပုိုဆုိုးသည်မှာ ပိတ်ပင်တားဆီးမှုမျိုးစုံ လုပ်လာတဲ့ အစုိုးရကရှိနေတော့ ထင်တာ မြင်တာ အပစ်ဖုို့ ဘုို့ အကြောင်းရင်းက လုံလောက်လာတယ်။ ဒီလုို အခြေအနေမှာ လက်နက် စွန့် ဖုို့ ဘယ်လုိုမှ မဖြစ်နုိုင်ပါ။ နုိုင်ငံတကာမှာလဲ လူမျိုးစုတုိုင်းရဲ့ အခြေခံ ရပုိုင်ခွင့် (Indigenous rights) ကုို အလေးအနက်ထားနေတဲ့ အချိန် ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတော့ လက်နက်ကုိုင်တော်လှန်ခြင်း ဆုိုသည်မှာ အဲဒီလုို အခြေအနေအတွက် လူမျိုးစု တစ်ရပ်ရဲ့ ရပ်တည်ခြင်းအတွက် တုိုက်ပွဲဝင်ခြင်း (Fight for Existence) ဖြစ်သင့်တယ် ဆုိုတဲ့ အယူအဆက သက္ကသုိုလ်တုိုင်းရဲ့ စာတမ်းဖတ်ပွဲမှာ တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။
(၅) လူများစုကုို လူနည်းစုက လေးစားခြင်း (ကြောက်ရွံ့ခြင်း မဟုတ်) ဆုိုသည်မှာ နုိုင်ငံ တခုရဲ့ တည်ငြိမ်ခြင်းနဲ့ တုိုးတက်ခြင်းရဲ့ လမ်းစ ဖြစ်ပါတယ်။ ထုိုင်းနုိုင်ငံမှာ ထုိုင်းလူမျိုးတွေချည်း နေထုိုင်တာ မဟုတ်ပါ။ မြန်မာ နုိုင်ငံနဲ့ အတူတူလောက် တုိုင်းရင်းသား လူနည်းစု များပါတယ်။ သူတုို့ဌာနေ ရှိတယ်။ ဒါပေမယ့် လူများစုဖြစ်တဲ့ ထုိုင်းလူမျိုးတွေ ကုို လေးစား ကြပါတယ်။ အထင်ကြီးကြပါတယ်။ တုိုင်းရင်းသား ဒေသ တွေမှာ ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းပဲ လုပ်တယ်။ ကြီးစုိုးရေး မလုပ်ဘူး။ သူ့ဒေသ သူ့ လူ အုပ်ချုပ် ခုိုင်းတယ်။ ဘန်ကောက်လုို မြို့ကြီးက ထုိုင်းလူမျိုးတွေ လာပြီး ဗုိုလ်မကျ ဘူး။ တောင်ပုိုင်းက မလေး မူဆလင်တွေ အုံကြွမှု ဖြစ်ပေမယ့် အဲဒီ မလေးလူမျိုးတွေကုို ၀န်ကြီးအဆင့်ထိ နေရာပေးတယ်။ စစ်တပ်မှာ ထိပ်ဆုံး ပုဂ္ဂိုလ်တောင် ပါသေးတယ်။ နုိုင်ငံအထဲမှာ ရှိနေတဲ့ လူသားတုိုင်း တရားဝင် နေထုိုင်တယ် ဆုိုရင် ဥပဒေ ရဲ့ အကာအကွယ် ရစေတယ်။ ဗမာ တွေကုို ဘယ်လောက်မုန်းမုန်း မြန်မာ ၂ သန်းလောက်ကုို မောင်းထုတ်ရေး မရှိဖူးပါဘူး။ လူမျိုးရေး အဓိဂရုန်း တွေ မရှိဘူး။ တရုတ်တွေ စီးပွါးရေးမှာ လွတ်လွတ်လပ်လပ် လုပ်နုိုင်လုို့ နုိုင်ငံ့ ဘဏ္ဍ တုိုးပွါးစေတယ်။ ကုလားတွေလဲ လွတ်လွတ်လပ်လပ် လုပ်နုိုင်ကြပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် မြန်မာနုိုင်ငံသားတွေ ထုိုင်းကုို သွားနေရတာပါ။
ကချင်တွေ ခေါင်းမာ တယ်တဲ့။
Posted: 26 May 2014 09:29 PM PDT
မနှစ်က တောင်ကြီးသွားတော့ ဟဲဟုိုး လေဆိပ်မှာ ဆင်းဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာပြည်ရဲ့ ပြည်တွင်းလေဆိပ် ထုံးစံ အတုိုင်းပေါ့ ပစ္စည်းသယ်ခ ဆုိုပြီး တောင်းလေ့ရှိတယ်။ တစ်အိတ်ကုို ငါးရာ၊ တစ်ထောင် ဆုိုပြီး လူပုံအလည်မှာ တောင်းနေကြတာပါ။ တူညီ ၀တ်စုံ ၀တ်ထားတဲ့ လူတွေကြီးပါပဲ။
ဒူဝါ ကုို ပအုို့ တုိုင်းရင်းသားလုို့ ထင်ရတဲ့ သုံးဘီးဆုိုင်ကယ် မောင်းသမားက လေဆိပ်အထွက်မှာပဲ သူ့သုံးဘီးငှားဖုို့ တစာစာ တောင်းဆုိုနေတာနဲ့ တောင်ကြီးသွားဖုို့ ဈေးညှိလိုက်တယ်။ အိတ်ထုတ်ရအုံးမယ် လုို့ ပြောတော့ သူထုတ်ပေးမယ် ပေါ့။
ဒါနဲ့ အတူစောင့်နေကြတယ်။ အိတ်တွေသယ်လာတဲ့ လက်တွန်းလှည်း အပြည့် ထွက်လာပါပြီ။
ကုိုယ့်အိတ် သူ့အိတ်ရွေးကြရင်း နဲ့ ကျနော့ အိတ်ကုို လက်ညှိးထုိုးလုိုက်တယ်။ အဲဒီမှာပဲ လေဆိပ် ၀န်ထမ်းလုို့ ထင်ရသူ ယူနီဖေါင်းဝတ် တစ်ယောက်က အိတ်သယ်ခ တစ်ထောင် လုို့ ဆုိုလာတယ်။ ငါ့လူ ပအုို့ ကောင် က သူ့ ပအုို့လေသံ နဲ့ “ဟုို ကုို ကြီးဟာ” (တုိုင်းရင်းသား အချင်းချင်းမုို့လုို့နားလည်လုိုက်တာပါ) လုို့ပြောလုိုက်တော့ လေဆိပ် ၀န်ထမ်း ကြားလုိုက်တဲ့ အသံက “ဟုို ဘုိုကြီးဟာ“ ဖြစ်နေတယ်။ အဲဒါနဲ့ အော်.. ဗုိုလ်ကြီးဟာ လား.. တဲ့။ ဒါဆုို ယူသွား.. ဆုိုပြီး အလကား လွတ်လိုက်တယ်။ ဒူဝါ့ကုို ဗမာ စစ်ဗုိုလ်ထင်သွားပုံ ရပါတယ်။
ဒါနဲ့ ဒူဝါ လဲ မကျေနပ်တော့.. ငါ ဗုိုလ်ကြီး မဟုတ်ဘူး သာမန် အရပ်သား ပါ လုို့ ပြောလုိုက်တယ်။
ဒီတော့.. ဒါဆုို အိတ်သယ်ခ ပေး.. တဲ့။ မပေးနုိုင်ဘူး လုို့ပြောလုိုက်တယ်။
ဘယ်က လဲ... (သူမေးတာ ဘယ် ဌာနကလဲ လုို့ ဆုိုပုံ ရပါတယ်။)
အိတ်သယ်ခ ပေးရမယ်.. တဲ့။
ခင်များက ၀န်ထမ်းလား.. လုို့မေးလုိုက်တယ်..
ဒါဆုို.. တရားဝင် ကောက်တာလား.. ဆုိုတော့..
တရားဝင်တော့ မဟုတ်ဘူး.. တဲ့။
တရားဝင် မဟုတ်ရင် မပေးနုိုင်ဘူး.. လုို့ ပြောလုိုက်တယ်။
မဟုတ်ဘူးလေ... လူတုိုင်းပေးရတာပဲ.. တဲ့။
လူတုိုင်းပေးလဲ ကျနော် မပေးနုိုင်ဘူး.. ငါက လေဆိပ် အခွန်ဆောင်ပြီးသား... ခင်များတုို့ လေဆိပ် ၀န်ထမ်းတွေက ပစ္စည်းသယ်ပေးရမဲ့တာဝန်ရှိတာပဲ.... တရားဝင် ကောက်တယ် ဆုိုရင် လေဆိပ် တံဆိပ်တုံးပါနဲ့ ငွေ လက်ခံ ဖြတ်ပုိုင်း ပေးပါ။ ကောင်တာနဲ့ ကောင်းကောင်း ကောက်ပါ။ လုို့ ပြောလုိုက်တယ်။
အဲဒီမှာ သူက ကြောင်တောင် တောင် ဖြစ်နေချိန်.. ငါသွားပြီနော်...
နောက်မှာ သဲ့သဲ့ ကြားလုိုက်တဲ့ အသံ...
ဒီ ကချင် တွေ တော်တော် မလွယ်ဘူး.. ခေါင်းမာတယ် တဲ့။
at 5/27/2014 11:37:00 AM
ဗိုလ်သန်းရွှေ ဦးဆောင်တဲ့ ဖက်ဆစ်စစ်အုပ်စုလက်ကိုင်တုတ်ကြံ့ဖွံ့အစိုးရဟာ နိုင်ငံရေးပွဲစားတချို့နဲ့
စားဖားသတ္တဝါ တချို့ကိုသုံးပြီး အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး-ငြိမ်းချမ်းရေးဆိုတဲ့ ပြယုဂ်နဲ့ တိုင်းရင်းသား
လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးအင်အား စုကို အရှက်မရှိပြောင်ပြောင်တင်းတင်းဖြိုခွဲနေပြီ။
နောက်ကြောင်းပြန် အတိုချုံး ပြန်သုံးသပ်ရမယ်ဆိုရင်နဝတ/နအဖ စစ်အုပ်စုဟာ
၁၉၈၉-၁၉၉၅ ခုကစပြီး တိုင်းရင်း သားလက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းအတော်များများနဲ့
အပစ်အခတ်ရပ်စဲပြီး နိုင်ငံရေးစကားပြောမယ်ဆိုပြီး တော့ နည်းမျိုးစုံနဲ့သပ်သျှိုဖြိုခွဲ လုပ်ခဲ့တယ်။
တချို့အဖွဲ့အစည်းများ နိုင်ငံရေး စစ်ရေး အတော်အထိနာသွားတယ်။နိုင်ငံရေးပြောချင်ရင်
"အနာဂတ်အမျိုးသားနိုင်ငံရေးတွင် တပ်မတော်က အစဉ်တစိုက် ဦးဆောင်ပါဝင်ထမ်းဆောင်နိုင် ရေး"
ဆိုတဲ့ဦးတည်ချက်နဲ့ အခြေခံမူ ၁၀၄ ချက် ချမှတ်တဲ့ အတုအယောင်အမျိုးသားညီလာခံတက်ရောက်စေခဲ့တယ်။ အဲဒီဦးတည်ချက်နဲ့ အခြေခံမူများအပေါ် ဘယ်အဖွဲ့အစည်းမှကျော်လွှားလို့မရ။နောက်ဆုံးတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် တော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်း
၁၃ ဖွဲ့စုစည်းပြီး ဒီမိုကရေစီနဲ့တိုင်းရင်းသားတန်းတူရေးရှိတဲ့ ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စု ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံမူတခုကို
တင်ပြခဲ့တယ်။ ဒါပေမဲ့စစ်အုပ်စုက "မင်းတို့အဲဒါတွေရချင်ရင် တောထဲပြန်ဝင်ပြီးတိုက်ယူ"
လို့ မိုက်ရိုင်းစွာကြိမ်းဝါးတာဘဲခံရပြီးအမှိုက်ပုံထဲရောက်သွားလို့ စိတ်ပျက်လက်ပျက်နိဂုံးချုပ်ခဲ့ရတယ်။
နအဖ စစ်အုပ်စုဟာ အနာဂတ်အမျိုးသားနိုင်ငံရေးတွင်တပ်မတော်က အစဉ်တစိုက် ဦးဆောင်ပါဝင်
ထမ်းဆောင်နိုင် ရေး ဆိုတဲ့ဦးတည်ချက်အတိုင်း ပြည်သူတရပ်လုံးအပေါ်ဆက်လက်ကျွန်ပြုထားပြီး
တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုများ အမျိုး ဖြုတ်ရေးဖြစ်တဲ့ ၂၀၀၈ ခုဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို အတင်းပြဋ္ဌာန်းအတည်ပြု
လိုက်ပြီးတာနဲ့ တိုင်းရင်းသားလက်နက် ကိုင်တော်လှန်ရေး အဖွဲ့အစည်းအားလုံးအကြွင်းမဲ့လက်နက်ချရေးဖြစ်
တဲ့ စစ်တပ်လက်အောက်ခံ နယ်ခြားစောင့်တပ် နဲ့ ဌာနေပြည်သူ့စစ်အဖြစ်အသွင်ကူးပြောင်းရန် ၃ ကြိမ်တိုင်တိုင်
ခြိမ်းချောက် ရာဇသံပေးလိုက်တယ်။ ဒါပေမဲ့ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့ ၂ ဖွဲ့ ၃ ဖွဲ့မှအပ
လုံးဝလက်မခံဘဲ အာခံလိုက်တဲ့အတွက်အရှက်မရှိ လျှော့ထား လိုက်သယောင်ယောင်နဲ့ ဒီနေ့ အပစ်အခတ်
ရပ်စဲရေး-ငြိမ်းချမ်းရေးဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်တပ်ကာ သွေးတိုးစမ်းပြီး နည်း မျိုးစုံနဲ့ သပ်သျှိုဖြိုခွဲနေတာကို
အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေး ပြယုဂ်ဖြင့် ဖြိုခွဲခြင်း
ဗိုလ်သန်းရွှေ ဖက်ဆစ်စစ်အုပ်စု ကြိုးကိုင်ထားပြီးအရပ်သားအသွင်ယူစစ်အစိုးရဖြစ်တဲ့ ဦးသိန်းစိန်အစိုးရ
တက်လာ တာနဲ့တပြိုင်နက် အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး-ငြိမ်းချမ်းရေးကနေပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေး ဆိုပြီး
တလျှောက်လုံး အသံ ကောင်းဟစ်လာခဲ့တယ်။ အပစ်အခတ်ရပ်စဲခြင်း-ငြိမ်းချမ်းရေးတည်ဆောက်ခြင်းဆိုတာ
ကမ္ဘာ့လူသားတိုင်း ကြိုက်နှစ် သက်ကြတာဖြစ်လို့ ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂ နဲ့ နိုင်ငံတကာတို့ကလည်းချီး
ကျူးဂုဏ်ပြုကြတယ်။ ဥရောပအဖွဲ့ကလည်း ဒေါ်လာသန်း ၄၀ လောက်ကူညီသွားတယ် ဆိုတာလည်း
အဲဒီလိုသတင်းကြားရတာနဲ့ ဒီအထုပ်ကြီးကို လုစားဝေစားကြဖို့နိုင်ငံရေးပွဲစား ဟန်ယောင်ဝှေ၊
စားဖားများဖြစ်ကြတဲ့ မင်းဇော်ဦး၊ အောင်နိုင်ဦး၊ ညိုအုန်းမြင့်၊အောင်သူငြိမ်း၊ အင်ဒရူးငွန်ကျုံးလျံ၊
မန်းငြိမ်းမောင်တို့ဟာ ဦးသိန်းစိန်ဆီ သွားပြီးအရှက်မရှိ ခြေသလုံးသွားဖက်ကြတယ်။
ဒါကြောင့် ကျီးကဘုတ်ကိုရိုသေ၊ ဘုတ်ကိုကျီးကရိုသေဟန်ဆောင်ကြပြီး ဟန်ယောင်ဝှေကို
တိုင်းရင်းသားအင်အားစုတွေ ၂၀၀၈ ခု ဖွဲ့စည်းပုံအောက် ခေါင်းငုံ့အညံ့ခံထည့်သွင်း ရေးကျွန်ပွဲစားကြီး
အဖြစ်လည်းကောင်း၊ ကျန်စားဖားတွေကို နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး၊ဥပဒေရေး၊ ငြိမ်းချမ်းရေး အကျိုး
တော်ဆောင်များ အဖြစ်လည်းကောင်း အထုပ်ကြီးကို ဝါးစေဝေစားကြတာပေါ်တင်ကြီးတွေ့ရှိရတာဖြစ်တယ်။
Read more+++click on link +++++
ကချင်လူထုအခြေပြုအရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများ၏ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲမှ သဘောထားထုတ်ပြန်ချက်
at 5/27/2014 10:48:00 AM
May 26, 2014 at 10:51pm
၂၃ရက်၊ မေလ၊ ၂၀၁၄ ခုနှစ်
ကချင်ပြည်နယ်၊ မိုင်ဂျာယာန်မြို့တွင်၂၀၁၄ခုနှစ်၊ မေလ၊ ၂၀-၂၂ရက်အတွင်း ကချင်လူထုအခြေပြု အရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်း(၁၇)ဖွဲ့များ၏စုပေါင်းတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲ ကျင်းပပြုလုပ် ခဲ့ပါသည်။ ဤတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲတွင် လတ်တလောကချင်ဒေသများ၌ ဖြစ်ပွားနေသော စစ်ပွဲပဋိပက္ခ အခြေအနေများ၊ ပြည်တွင်းနေရပ်စွန့်ခွာစစ်ပြေးဒုက္ခသည်များနှင့်ဒေသခံပြည်သူများ ကြုံတွေ့ နေရသော ဆင်းရဲဒုက္ခများအကြောင်းကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။ ယခုနှစ်ဧပြီလ လဆန်းပိုင်းမှစ၍ ကချင်ပြည်သူများနေထိုင်ရာ ဒေသများသို့မြန်မာအစိုးရစစ်တပ်၏ စစ်အင်အားသုံးထိုးစစ်ဆင် မှုများကြောင့် ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနှင့်ကချင်ပြည်နယ် ပြည်တွင်းစစ်ပြေး ဒုက္ခသည်ပေါင်း(၄၀၀၀)ကျော်ခန့် ထပ်မံတိုးမြှင့်လာခြင်း၊ စစ်ပြေးဒုက္ခသည်များနှင့် ဒေသခံ လူထုများ၏လူအခွင့်ရေးချိုးဖောက်ခံရမှုများအပေါ် အထူးစိုးရိမ်ပါသည်။
မြန်မာစစ်တပ်သည်တစ်နိုင်ငံလုံးအပစ်အခတ်ရပ်ဆဲရေး ဆိုင်ရာညှိနှိုင်းဆွေးနွေးနေစဉ်ကာလတွင်ပင် မြန်မာ -တရုတ် နယ်စပ်တလျှောက်ရှိ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်အချက်ချာကျသောနေရာ နှင့် စီးပွားရေးဇုန်လုံခြုံစွာထိန်းချုပ်နိုင်ရေးအတွက် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များထိန်းချုပ်သည့်နေရာဒေသများကို ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ နည်းစနစ်ကျကျ ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေပါသည်။
ထို့ကြောင့်ငြိမ်းချမ်းရေးတည်ဆောက်မှုတွင်စစ်မှန်သည့်တရားမျှတမှုရရှိရန် အောက်ပါ သဘောထားများကို ထုတ်ပြန်လိုက်ပါသည်။
၁။ ကချင်ပြည်သူများနေထိုင်ရာ ဒေသများတွင်စစ်အင်အားတိုးချဲ့ထားသော မြန်မာစစ်တပ်များ၊ အထူးသဖြင့် စစ်ပြေးဒုက္ခသည်စခန်းများအနီးရှိမြန်မာစစ်တပ်များအားလုံး ရုတ်သိမ်းပေးရန်။
၂။ မြန်မာစစ်တပ်မှ ပြည်တွင်းစစ်ပြေးဒုက္ခသည်များကိုနိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှု ဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအရ ပြည်တွင်းစစ်ပြေး ဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာ အခွင့်အရေး( IDPsRight)ကို လေးစားလိုက်နာရန်။
(က) မြန်မာစစ်တပ်မှ အကြမ်းဖက်မတရားနှိပ်စက်မှုများ၊ ခြိမ်းချောက်မှုများ၊ စစ်နည်းပရိယာယ်သုံးကာ စစ်ဆေးမေးမြန်းမှု လုံးဝမပြုလုပ်ရန်။
(ခ) အသက်၊ အိုးအိမ် ဘေးကင်းလုံးခြုံရေးအတွက်အာမခံချက်ရှိသော အခြေအနေရောက် ရှိမှသာလျှင် မိမိနေရပ်ပြန်ရေးကို နိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအရ လေးစားလိုက်နာ လုပ်ဆောင်ရန်။
၃။ လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခဖြစ်ပွားနေစဉ်နှင့်ငြိမ်းချမ်းရေးတည်ဆောက်နေဆဲကာလတွင် နိုင်ငံတကာမှ နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများလုံးဝမပြုလုပ်ရန်။
၄။ ကချင်ပြည်နယ်ရှိ သဘာဝသံဇာသများကိုထုတ်ယူ၊ တူးဖော်ခြင်းများ၊ လယ်ယာမြေသိမ်းယူခြင်းများ၊ ဒေသခံပြည်သူများကို အတင်းအဓမ္မရွှေ့ပြောင်းစေခြင်းများကိုစစ်မှန်သော နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးမှု မလုပ်ဆောင်နိုင်သေးသ၍ မပြုလုပ်ရန်။
၅။ နိုင်ငံကြီးများဖြစ်ကြသော အထူးသဖြင့်အမေရိကန်နိုင်ငံ၊ အင်္ဂလန်နိုင်ငံ၊ ဥရောပနိုင်ငံများ၊ တရုတ်နိုင်ငံတို့မှ မြန်မာနိုင်ငံတွင်ပြည်တွင်းစစ်ဋိပက္ခဖြစ်ပွားနေစဉ် မြန်မာစစ်တပ်ကို ကူညီထောက်ပံ့မှုများ လုံးဝမပြုလုပ်ရန်။
၆။နိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာ အကူအညီပေးရေးအဖွဲ့များ၏ ထောက်ပံ့မှုများလိုအပ်သည့်နေရာဒေသများသို့ ထိရောက်စွာရောက်ရှိနိုင်ရန် ဒေသခံလူထုအခြေပြုအရပ်ဖက် လူ့အဖွဲ့စည်းများနှင့်တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်လုပ်ဆောင်သွားရန်။
ဆက်သွယ်ရန် - မေရီတောမ် +၈၆ ၁၅၃၆ ၈၉၆၅၅၇၆
စာဂျီ +၉၅ ၉၄၀ ၁၅၃၈၂၄၉
1. All Kachin Students and Youth Union (AKSYU), 2. BRIDGE, 3. CommunityHealth and Development, 4. Htoi Gender and Development Foundation, 5. JLH RamCare (Youth Rescue), 6. Jan Lata Ni Foundation, 7. Kachin Women Association(KWA), 8. Kachin Baptist Convention (KBC), 9. Kachin Development NetworkingGroup (KDNG), 10. Kachin Legal Aid Network Group, 11. Kachin Urban RuralMission (KURM), 12. Kachin Women’s Association Thailand (KWAT), 13. KachinWomen Union (KWU), 14. Myitkyina Students Union, 15. MungchyingRawt Jat (MRJ), 16. Wunpawng Ninghtoi (WPN), 17. Youth and Drug
at 5/27/2014 10:46:00 AM
Barack Obama's photo.
1861-1865 hta byin ai dinghku majan hta asak ap nawng mat wa sai share shagan ni hpe shagrau shaa masat masa ai lam re.1968 ning kaw nna galaw hpang wa ai .
No 1,No2Mungkan majan kaba hta Majanamajaw si mat ai ni hpe myit dum ai lam mung re.
1971 ning kaw nna gaw (P.L.90-363) daw dan minit hte maren Federal holiday hku nna3ya galaw na matu masat shagrin dat ai hte May shata hpang jahtum ngu na batabat langai ya shani Monday shaloi gaw Memorial day hku nna masat let, share shagan nialup ding lupwa de sa nna hkungga masat galaw ai lam,USA dawng hkawn hpe loi mi shayu jahkrat tawn da ai lam ni hpe galaw ma ai re.Gum San Magam Obama mung ya na zawn lup ding lup wa de sa nna hkrat sum mat wa sai USA share shagan ni hpe myitdum shagrau masat galaw ai lam ni hpe shi nan tatut woi awn galaw ai hpe mu lu ga ai law......By Lagwi Myu Lat
"Today, we pause to remember our fallen troops, to mourn their loss, and to pray for their loved ones. Though our hearts ache, we findameasure of solace in knowing their legacy lives on in the families our heroes left behind." —President Obama
at 5/27/2014 07:54:00 AM
ဖယ်ဒရယ်၏ အနှစ်သာရအနေဖြင့် ဒီမိုကရေစီရေး၊ အမျိုးသားတန်းတူရေးနဲ့ ကိုယ်ပိုင်ပြဌာန်းခွင့်ကို အာမခံ သော ပြည်ထောင်စုဟူသည်အား အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး စာချုပ်တွင် ထည့်သွင်းရန်မြန်မာတပ်မတော်က လက်ခံ လိုက် ပြီ ဖြစ်ကြောင်း ၂၀၁၄ ခုနှစ် မေလ ၂၂ ရက်တွင် သတင်းများ ထွက်ပေါ် လာသည်။ ယင်းကို သုံးသပ်ရန်လိုပါမည်။
ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စု တည်ဆောက်ရေးကို လက်ခံလျှင် လက်ခံသည်၊ လက်မခံလျှင်လည်း လက်မခံနိုင်ပါ ဟု ရိုးရိုးပြောရုံသာ ဖြစ်သင့်သည်။ ဖက်ဒရယ်၏ အနှစ် သာရ ဟူသည်ကို ယူသော်လည်း၊ ဖက်ဒရယ် ဝေါဟာရ အတိ အကျကို မသုံး၊ ဖက်ဒရယ် ပြည်ထောင်စု တည်ဆောက် သွားရန် လုပ်ငန်းစဉ်ကို သဘောတူညီချက်မရပါက ယင်းမှာ လိမ်ဆင်ကြီးသာဖြစ်ပါမည်။
၁၉၆၂ ခုနှစ်တွင် ဗိုလ်ချုပ်နေ၀င်းခေါင်းဆောင်ကာ စစ်တပ်က အာဏာသိမ်းခဲ့ပြီးနောက် စစ်ဗိုလ်များသည် လက်သီးလက်မောင်းတန်းကာ ဆိုရှယ်လစ်ရေးကို ကြွေးကြော်ခဲ့ကြသည်။ ၄င်းတို့ ဦးဆောင်ပြီး မြန်မာ့ဆိုရှယ်လစ် လမ်းစဉ်ပါတီ တည်ထောင်ခဲ့သည်။ စင်စစ်အားဖြင့်မူ ၄င်းတို့ သည် မည်သည့် ဆိုရှယ်လစ်စနစ်ကိုမျှ ယုံကြည်ခဲ့ကြ သူများ မဟုတ်ကြ။ လက်တွေ့ အားဖြင့်မူ စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုသာ ကျင့်သုံးခဲ့ကြသည်။ ကျဆုံးသွားခဲ့ပြီဖြစ်သော ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ဆလိုင်းတင်မောင်ဦးက ထိုအခြေအနေအား “ဆိတ်ခေါင်းချိတ်ပြီး ခွေးသားရောင်းခြင်း” ဟု ကင်ပွန်းတပ်ခဲ့သည်။ ထိုစဉ်က ဆိုရှယ်လစ် ဆိတ်ခေါင်းချိတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ရှင်းရှင်း မြင်နိုင်သည်။
ယခုမူ ဖက်ဒရယ် ဆိတ်ခေါင်းပင် ချိတ်သည့် အဆင့်သို့ မရောက်သေး။ ဖက်ဒရယ် အရောင်လေး ထိုးပေး လိုက်သည်ကိုပင် ၀မ်းသာကြောင်း ပြနေရသည့် ဘ၀ ဖြစ်သည်။ ယင်းအတွက်ပင် စစ်ခေါင်းဆောင် ဟောင်း သစ် များအား ဂရုဏာရှင်ကြီးများအဖြစ် ကျေးဇူး တင်ရမလိုလို ဖြစ်နေသည်။ တဖက်တွင် ၂၀၀၈ ဖွဲ့ စည်းပုံဖြင့်ခွေးသား များ အကြီးအကျယ် တည်ခင်းရောင်းချ နေသည် ကို မမေ့သင့်ပါ။ ဆိတ်ခေါင်းကို မြှော်ကြည့်ပြီး ခွေးသားမစားမိစေရန် သတိပြုရပါမည်။
“ဘက်နှစ်ဘက်ဆွေးနွေးပွဲများ ကျင်းပနေရာမှာ ကိုယ့်ဘက်တဘက်တည်းက ကိုယ်လိုခြင်တာကို အသေ ကိုင်ထားလို့ ဘယ် ရပါ့ မလဲ၊ ဟိုဘက်ကလည်း နည်းနည်းလျှော့၊ သည်ဘက်ကလည်း နည်းနည်းလျှော့၊ ဒါမှသာ ဆွေးနွေးပွဲအောင်မြင်မှာ ပေါ့ ” ဟူ၍ ရွှေပြည်အေး ကိုယ်တော်လိုလို ပုဂ္ဂိုလ်များထံမှ အသံများ ထွက်လာလေ့ရှိသည်။ အချက်ပေါင်း ဘယ်နှစ်ရာ ကျော်မှာ ကျုပ်တို့ ဘက်ကတော့ ဘယ်နှစ်ချက် လိုက်လျှောလိုက်ပြီ၊ တိုင်းရင်းသား အဖွဲ့အစည်းတွေဘက်ကလည်း ဘယ်နှစ်ချက်တော့ လိုက်လျောရမှာပေါ့ ၊ သည်လိုဆိုရင် ဆွေးနွေးပွဲအောင်မြင်လိမ့်မယ် ဟူ၍ ဦးအောင်မင်းက လည်း မကြာမကြာ “လုံးတုတ်” တတ်သည်။ ဤတွင် ဆွေးနွေးပွဲအောင်မြင်ရေးက အဓိကလား ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် စစ်မှန်သည့် လမ်းကြောင်း ချနိုင်ရေးက အဓိကလား၊ စဉ်းစားရပါမည်။ ပြည်တွင်းငြိမ်း ချမ်းရေးအတွက် စစ်မှန်သည့် လမ်းကြောင်းကို ကျားကုတ် ကျားခဲမရှာဖွေဘဲ နှစ်ဘက်သဘောတူနိုင်ရေးအခြေခံတွင် ဆွေးနွေးပွဲအောင်မြင်ရေးကိုသာ ရှေ့ ရှုပါက တိုင်းပြည်၏ အနာဂါတ်မှာ ရင်လေးဘွယ်ဖြစ်သည်။
နှစ်ဘက် ဆွေးနွေးကြရာတွင် တဘက်နှင့် တဘက် အပြန်အလှန်လိုက်လျှောမှုများ၊ အလျှော့အတင်းများ ရှိ ကြရမည် ဟူသည်ကို အခြေခံအားဖြင့် မငြင်းပါ။ အလျှော့အတင်း လုပ်၍ ရနိုင်သော ကဏ္ဍများ အမြောက်အများရှိနိုင် ပါသည်။ သာဓကအားဖြင့် တပ်နေရာချထားရေး၊ ဆက်ဆန်ရေးရုံးဖွင့်လှစ်ရေး၊ နိုင်ငံတကာအကူအညီကို ရှာဖွေ၊ လက်ခံ၊ ဖြန့် ဖြူးရေး၊ သတင်းထုတ်ပြန်ရေး၊ ပဋိပက္ခဖြေရှင်းရေး စသည်တို့ တွင် ဖြစ်သည်။ သို့ ရာတွင် အတွေးအခေါ် ပိုင်း၊ အခွင့်အရေးပိုင်း၊ မူပိုင်းဆိုင်ရာများနှင့် စပ်လျှဉ်း၍ အလျှော့အတင်းလုပ်၍မရနိုင်ပါ။ လက်ခံလျှင် လက်ခံသည်။ လက်မခံလျှင် လက်မခံနိုင်ပါ ဟု ကိုယ့်ရပ်တည်ချက်ပေါ်တွင် ကိုယ်ရပ်ကြရုံသာဖြစ်သည်။
တောင်အာဖရိကနိုင်ငံ ဆွေးနွေးပွဲများတွင် နယ်လ်ဆင်မန်ဒဲလားခေါင်းဆောင်သည့် အေအင်စီ အဖွဲ့ က လူဖြူ လူမဲ ခွဲခြားရေးဝါဒ ကို ရုပ်သိမ်းပယ်ဖျက်လိုက်ရန် အဆိုတင်ခဲ့သည်။ ဤသည်မှာအတွေးအခေါ်အယူဝါဒပိုင်းဖြစ်သည်။ အလျှော့အတင်းလုပ်၍မရ။ မင်းဘက်ကနဲနဲ လျှော့၊ ငါ့ဘက်ကလည်း နည်းနည်းလျှော့ကြရအောင်ကွာ။ လူဖြူလူမဲခွဲ ခြားရေးဝါဒကို အနည်းအကျဉ်းတော့ ဆက်သုံးခွင့်ပေးပါဟူ၍ ညှိနိုင်းခဲ့ကြခြင်း မဟုတ်။ ဒီကလပ် ခေါင်းဆောင်သည့် အစိုးရဘက်က လူဖြူ လူမဲ ခွဲခြားရေးဝါဒ ကို အပြည့်အ၀စွန့် လွှတ်ပေးခဲ့သည်။
ဆိုရှယ်လစ် စနစ်ကို မကြိုက်၊ လစ်ဘရယ်ဝါဒကို သဘောကျသည် ဟုဆိုလျှင် ပြသနာမရှိ။ ဆိုရှယ်လစ်က နိုင်ငံရေးအတွေးအခေါ် အယူအဆ တခုဖြစ်ပြီး လစ်ဘရယ်ဝါဒက အခြားတခုဖြစ်နေသောကြောင့်ပင်။ သို့ မဟုတ် လစ်ဘရယ်ဝါဒကို မကြိုက်၊ ဆိုရှယ်လစ် စနစ်ကို နှစ်ခြိုက်သည်ဟု ဆိုလျှင်လည်း ကာယကံရှင်၏ သဘောအတိုင်း ဖြစ်သည်။ ပြသနာမရှိ။ “ဆိုရှယ်လစ်” က “ဆိုရှယ်လစ်” ဖြစ်နေပြီး “လစ်ဘရယ်” က “လစ်ဘရယ်” ဆက်ဖြစ်နေသော ကြောင့်ပင်။ သို့ ရာတွင် “မြန်မာ့နည်း မြန်မာ့ဟန်ဖြင့် ကျင့်သုံးသော ဆိုရှယ်လစ်” ဟူ၍ ရှေ့တွင် နာမ၀ိသေသနများ တပ် လိုက်သောအခါ “ဆိုရှယ်လစ်” သည် “ဆိုရှယ်လစ်ပျက်” ဖြစ်သွားတော့သည်။ ၁၉၆၂ ခုနှစ်မှ စတင်၍ ဗိုလ်ချုပ် နေ၀င်း ဦးဆောင်ကျင့်သုံးခဲ့ပြီးပြီ။ မအောင်မြင်ပါ။
ထိုနည်းတူပင် ပြည်ထောင်စု တည်ဆောက်ရေးတွင် တပြည်ထောင်စနစ် နဲ့ တည်ဆောက်မည်လား၊ ဖက်ဒရယ် ပြည်ထောင်စု စနစ်နဲ့ တည်ဆောက်မည်လား ဟူ၍ နှစ်ခုသာရှိသည်။ တခုမဟုတ် တခုကို ရွေးရပါမည်။
ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စု စနစ်ကို အတိအကျ သဘောတူညီချက်မရဘဲ “ဒီမိုကရေစီရေး၊ အမျိုးသားတန်းတူရေးနဲ့ ကိုယ်ပိုင်ပြဌာန်းခွင့်ကို အာမခံသော ပြည်ထောင်စု” ဟူသည့်အပေါ် သဘောတူညီလိုက်ခြင်းဖြစ်လျှင်မူ “မြန်မာ့နည်း မြန်မာ့ဟန်ဖြင့် ကျင့်သုံးသော ဆိုရှယ်လစ်” နှင့် အလားတူဖြစ်ပါမည်။ “ဖက်ဒရယ်ပျက်” ဖြစ်သွားပါလိမ့်မည်။
ဤတွင် ပြည်ထောင်စုကို နာမ၀ိသေသနပြုထားသည့် ဒီမိုကရေစီရေး၊ အမျိုးသားတန်းတူရေးနဲ့ ကိုယ်ပိုင် ပြဌာန်းခွင့် ဟူသည့် နိုင်ငံရေးဝေါဟာရများ အပေါ် တစုံတရာ ဆန်းစစ်ရန် လိုအပ်လာသည်။ ယင်းတို့ မှာ ဖက်ဒရယ်၏ အနှစ်သာရ သက်သက်ဟုတ်ပါရဲ့ လားဟူ၍ဖြစ်သည်။
“ဒီမိုကရေစီ” သည် လူ့ အဖွဲ့ အစည်း၏ တန်ဘိုးတရပ်ဖြစ်၍ အများလိုလားကြသည် အမှန်ပင်။ သို့ ရာတွင် ဖက်ဒရယ်တွင် ဒီမိုကရေစီ ပါဝင်သည်ဟု ပြောလျှင် မှန်ပါမည်လား။ စဉ်းစားဘွယ်ဖြစ်သည်။ ဒီမိုကရေစီသည် တဦးချင်း အခွင့်အရေး နှင့် လွတ်လပ်မှု ကို ဇောင်းပေးသည်။ ဖက်ဒရယ်သည် ပြည်ထောင်စု တွင်ပါဝင်ဖွဲ့ စည်းသော ယူနစ်တခု ခြင်းစီ၏ စုပေါင်း အခွင့်အရေး ကို အဓိကထား သည်။ လူ့ အဖွဲ့ အစည်းအား ဤနှစ်ခုပေါင်းစပ်တည်ဆောက် သွားရန် ဖြစ်သည်။ ယင်းတို့သည် ပြိုင်လျှက်တည်ရှိသော တန်ဘိုးနှစ်ရပ်ဖြစ်သည်။ တခုသည် အခြားတခု၏အောက်တွင် ၀င်ရောက်တည်ရှိနေခြင်း မဟုတ်ပါ။ သို့ ရာတွင် တခုနှင့် အခြားတခုတို့သည် အပြန်အလှန်ပံ့ပိုးနေရန် လိုပါမည်။
သို့ ဖြစ်၍ ဒီမိုကရေစီ ကို ဖက်ဒရယ်၏ အနှစ်သာရအတွင်း မထည့်သွင်းသင့်ပါ။ သီးခြားယှဉ်ပြိုင်တည်ရှိနေ သည့် တန်ဘိုးတရပ်အဖြစ် အသိအမှတ်ပြုရန်လိုပါမည်။ ယင်းတန်ဘိုးနှစ်ရပ်အား နိုင်ငံတွင် တပြိုင်နက်တည်း ဆက် စပ်ကျင့်သုံးဘို့ လိုပါမည်။ ယင်းကိုလက်ခံလျှင် ဒီမိုကရက်တစ် ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စု ဟုသာ သုံးနုံးရပါမည်။ “ဒီမိုကရက်တစ် ဖက်ဒရယ် ပြည်ထောင်စု တည်ဆောက်သွားရန် ” ဟူသည်ကိုသာ သဘောတူညီချက်တွင် ထည့်သွင်း သင့်သည်။ ဤအခြေခံမူမျှကို သဘောတူညီချက်ရအောင် ကြိုးပမ်းနိုင်မှသာ အကျိုးရှိပါမည်။ အသေးစိပ်ကို နိုင်ငံရေး ဆွေးနွေးပွဲများသို့ဆက်သယ်သွားနိုင်သည်။
“အမျိုးသားတန်းတူရေး” ဟူသည်မှာ နိုင်ငံရေးကြွေးကြော်သံဖြစ်သည်။ သက်ဆိုင်ရာ အမျိုးသားများ တန်းတူမှု အခွင့်အရေးမရသဖြင့် ကြွေးကြော်တိုက်ပွဲဝင်ခြင်းဖြစ်သည်။ ယင်းကို ကန့် ကွက်ရန် မရှိပါ။ သို့ ရာတွင် နိုင်ငံရေးကြွေး ကြော်သံအား ယင်း၏မူရင်းအတိုင်း သဘောတူညီချက်တွင် ထည့်သွင်းမည်ဆိုပါက အငြင်းပွားဘွယ် များရှိပါမည်။ လက်တွေ့ ဖေါ်ဆောင်ရာ၌ မည်သည့်အရာ တခုမျှမရဘဲ နိဂုံးချုပ်သွားနိုင်ပါသည်။ အဘယ်ကြောင့် 
ဆိုသော် အမျိုးသား ဟူသော ဝေါဟာရကို အဓိပ္ပါယ် ဖွင့်ရာတွင် မည်သည်ကိုရည်ညွှန်းမှန်း မသေချာသောကြောင့်ပင်။ ယင်းတွင် နှစ်ပိုင်းရှိ သည်။ တပိုင်းမှာ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးတမျိုးခြင်းစီကို မီးမောင်းထိုးသည်။ ကရင်အမျိုးသား၊ ကချင်အမျိုးသား၊ ရှမ်းအမျိုး သား စသဖြင့် ဖြစ်သည်။ အခြားတပိုင်းမှာ ပြည်ထောင်စု နိုင်ငံတခုလုံးရှိ လူမျိုးအားလုံး၏ အရေးအရာအတွက်ဆောင်ရွက်ခြင်းကိုလည်း ကိုယ်စားပြုသည်။
နိုင်ငံရေးအရ စဉ်းစားလျှင် ၀ါဒနှစ်မျိုးဟု ပြောနိုင်သည်။ မိမိလူမျိုးအတွက် ဆောင်ရွက်သော လူမျိုးအလိုက် အမျိုးသားရေးဝါဒ နှင့် နိုင်ငံအတွင်း ရှိ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးအားလုံး အတွက် ဆောင်ရွက်သော ပြည်ထောင်စုအမျိုးသား ရေးဝါဒ တို့ ဖြစ်သည်။ ယင်းတို့ မှာ ပြည် ထောင်စု နိုင်ငံအတွင်း၌ ပြိုင်လျှက်တည်ရှိသော နိုင်ငံရေး အသွင်လက္ခဏာ နှစ်ရပ်ဖြစ်သည်။ နှစ်ခုလုံးတပြိုင်တည်း ရှင်သန်ကြီးထွားရန်လိုပါမည်။ တခုကို အစွန်းရောက်ကျင့်သုံးလျှင် အခြားတခု ထိခိုက်မှေးမှိန်နိုင်ပါသည်။
ပြည်ထောင်စု နိုင်ငံ အခြေခံမှစဉ်းစားလျှင် ပြည်ထောင်စု ဖွဲ့ စည်းရာတွင် ပါဝင်သော အမျိုးသားပြည်နယ် များ အတွက် လူမျိုးစုအမျိုးသားရေး က ပထမ တရပ်ဖြစ်သည်။ ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံတခုလုံးကို လွှမ်းခြုံသည့် ပြည်ထောင်စု အမျိုးသားရေး က ဒုတိယတရပ်ဖြစ်သည်။ တန်ဘိုးနှစ်ရပ်တွင် တရပ်သည် အခြားတရပ်၏ အောက်၌ ၀င်ရောက်တည် နေခြင်း မဟုတ်။ ပြိုင်လျှက်တည်ရှိနေကြခြင်းဖြစ်သည်။ တခုကြောင့် အခြားတခုကို အဆုံးရှုံးမခံသင့်။ တချိန်တည်း တွင် တခုနှင့် အခြား တခုတို့သည် အပြန်အလှန်ပံ့ပိုးနေရန် လိုပါမည်။
ယခုဆွေးနွေးပွဲတွင် တိုင်းရင်းသား အဖွဲ့ များ အနေဖြင့် အဓိကတောင်းဆိုရမည့်အပိုင်းမှာ ပြည်ထောင်စုကို အမျိုးသားပြည်နယ်များဖြင့်သာ ဖွဲ့ စည်းကာ၊ ယင်းတို့တခုနှင့်အခြားတခုအကြားတွင် တန်းတူရေးဟု နားလည်သည်။ စစ်အာဏာရှင်များကမူ ပြည်ထောင်စု တခုလုံးကို ယေဘုယျလွှမ်းခြုံသည့် အမျိုးသားရေးကိုသာ ရည်ညွှန်းဘွယ်ရှိ ဖြစ် သည်။ ၄င်းတို့ က ယင်းကို နှစ်ပေါင်းများစွာ တောက်လျှောက်မီးမောင်းထိုး ခဲ့သည်။ လက်တွေ့ တွင်မူ ပြည်ထောင်စု အမျိုးသားရေးကို တကယ်တန်း ကျင့်သုံးခဲ့ခြင်း မရှိ၊ မြန်မာပြည်နယ်ပါဝင် ဖွဲ့ စည်းစေပြီးနောက် အမျိုးသားပြည်နယ်များ အသီးသီးအကြား တန်းတူရေးကိုလည်း ဖေါ်ဆောင်ခဲ့ခြင်းမဟုတ်၊ စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုသာ ကျင့်သုံးခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ အကျိုးဆက်အနေဖြင့် အမျိုးသားပြည်နယ်များအတွက် အမျိုးသားရေးမှာ စတေးခံခဲ့ရသည်။
သို့ ဖြစ်၍ အမျိုးသား တန်းတူရေးကိုအခြေခံသော ပြည်ထောင်စုဟု သုံးနုံးကာ သဘောတူစာချုပ်ချုပ်ဆိုလျှင် နောက်ပိုင်းနိုင်ငံရေး ဆွေးနွေး ပွဲများ၌ ၀ိဝါဒကွဲကာ ဒိုင်စားသွားပါမည်။ စစ်အာဏာရှင် ဟောင်း သစ်များကသာ အမြတ် ထုတ်သွားပါမည်။ မြန်မာလူမျိုး၊ ကရင်လူမျိုး၊ ကချင်လူမျိုး စသည်တို့ အကြား ခွဲခြားမှုမရှိစေရဘဲ တဦးနှင့် အခြားတဦး အကြားတွင် တန်းတူရေးကို ကျင့်သုံးမည့် ပြည်ထောင်စုအဖြစ်သာ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုသွားနိုင်သည်။ ဤသည်မှာ မှားယွင်း သည်ဟု မဆိုလိုပါ။ လိုအပ်ချက် တရပ်ပင်ဖြစ်နေသေးသည်။ သို့ ရာတွင် တဦးချင်းအခွင့်အရေး ကိုသာ အသိအမှတ်ပြု ကျင့်သုံးသွားမည့် ပြည်ထောင်စု မျိုးဖြစ်သွားနိုင်သည်။ တဦးချင်း အခွင့်အရေးသာမက စုပေါင်း အခွင့်အရေးကိုပါ တပြိုင်တည်း အသိအမှတ်ပြုသောအမျိုးသားပြည်နယ်များကို ပထမနေရာတွင် အဓိကထားရပါမည်။ နာမ၀ိသေသန သည် အမျိုးသားပြည်နယ်များကို အထူးပြုရပါမည်။ ယင်းသို့ သော အရည်အချင်းနှင့် ပြည့်စုံသည့် အမျိုးသားပြည်နယ် များဖြင့်သာ ပြည်ထောင်စုကို ဖွဲ့ စည်းစေရပါမည်။ သို့ ဖြစ်လျှင် “တန်းတူရေးနှင့် ကိုယ်ပိုင်ပြဌာန်းခွင့်ကို ကျင့်သုံးသော အမျိုးသား ပြည်နယ်များဖြင့်သာ ဖွဲ့ စည်းထားသည့် ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စု” ဟူသည့်အပေါ်တွင်သာ ရှင်းလင်းစွာ နှစ်ဘက်သဘောတူညီကြဘို့လိုပါမည်။
ဖက်ဒရယ် ဝေါဟာရကို လွှတ်တော်က လက်ခံပြီး၊ မြန်မာ့တပ်မတော်က အဘယ်ကြောင့်ငြင်းပယ်နေသနည်း။
တိုင်းရင်းသားတော်လှန်ရေးအဖွဲ့ အစည်း ခေါင်းဆောင်များ (ဤမှနောင်တွင် တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်များ ဟုသာ သုံးပါမည်။) နှင့် ဆွေးနွေးပွဲတွင် စစ်ခေါင်းဆောင်များက ဖက်ဒရယ် ဟူသောဝေါဟာရအတိအကျကို သုံးစွဲရန် အကြောက်အကန်ငြင်းဆန်နေချိန်၌ ၂၀၀၈ ဖွဲ့ စည်းပုံတွင် ဖက်ဒရယ် ကို ထည့်သွင်းသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း လွှတ်တော် ဘက် မှ အသံ ကျယ်လောင်စွာထွက်လာသည်။ ဤသည်မှာ များစွာ အဓိပ္ပါယ်ရှိပါသည်။
လက်ရှိတည်ဆဲ ၂၀၀၈ ဖွဲ့ စည်းပုံတွင် ဖက်ဒရယ် ဟူသော ဝေါဟာရ ထည့်သွင်းလိုက် ရုံမျှနှင့် မည်သည့်အခါ တွင်မျှ ဒီမိုကရက်တစ် ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စု စစ်စစ်မဖြစ်နိုင်၊ စစ်အာဏာရှင်စနစ်သာ ဆက် လက်ကြီးစိုးနေမည် ဖြစ်သောကြောင့်ပင်။ သို့ ဖြစ်၍ ဦးရွှေမန်းခေါင်းဆောင်ပြီးကြံ့ဖွံ့ အမတ်များကြီးစိုးထားသည့် လွှတ် တော်အတွင်းတွင် ၂၀၀၈ ဖွဲ့ စည်းပုံ၌ ဖက်ဒရယ်ကို ထည့်သွင်းပေးရန် ဟန်ရေး တပြင်ပြင် ဖြစ်နေကြသည်။ တိုင်းရင်းသားတော်လှန်ရေး အဖွဲ့ အစည်းများ၂၀၀၈ ဖွဲ့ စည်းပုံဘောင်အောက် ရောက်လာရေးသာ ၄င်းတို့ အတွက် သေရေးရှင်ရေး ဖြစ်နေသည်။
တိုင်းရင်းသားတော်လှန်ရေးအဖွဲ့ အစည်းများက ၂၀၀၈ ဖွဲ့ စည်းပုံဘောင်အပြင် မှ ဆွေးနွေးနေခြင်းဖြစ်သည်။ “တန်းတူရေးနှင့် ကိုယ်ပိုင်ပြဌာန်းခွင့်ကို ကျင့်သုံးသော အမျိုးသား ပြည်နယ်များဖြင့်သာ ဖွဲ့ စည်းထားသည့် ဖက်ဒရယ် ပြည်ထောင်စု တည်ဆောက်ရန်” ဟူသည့်အပေါ်တွင် သဘောတူညီချက် ကျသွား လျှင် ၂၀၀၈ ဖွဲ့ စည်းပုံကို ယင်း အခြေခံအတိုင်းအစမှအဆုံး ပြင်ရပါမည်။ မပြင်နိုင်လျှင် အသစ်ရေးရပါမည်။ ယင်းသို့ ဖြစ်လျှင် စစ်အာဏာရှင်စနစ် ၏ ခံကတုတ်ကြီးပြိုပြီး စစ်မှန်သည့် ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေး ရသွားပါမည်။ မြန်မာ့တပ်မတော် စစ်ခေါင်းဆောင် များသည် ဤလမ်းကြောင်းမှန်ပေါ် လျှောက်လှမ်းရန် စဉ်းစားသင့်ပြီ။ တိုင်းရင်းသားပေါင်းစုံလူထုကြီးတရပ်လုံးနှင့် အတူ ခိုင်မြဲစွာ ရပ်တည်သင့်ပြီ။ ဤသို့ ဖြင့် တပ်မတော်၏ ဂုဏ်သိက္ခာကို ဆယ်တင်ခြင်းသည်သာ အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါမည်။
အစိုးရအာဏာပိုင်များ အဆိုပြု ပထမ နှင့် ဒုတိယ စာချုပ်ကို နှိုင်းယှဉ်လေ့လာခြင်း
ဦးသိန်းစိန် ဦးဆောင်သည့် အရပ်သားအသွင်ယူ စစ်အစိုးရတက်လာပြီးနောက် သုံးနှစ်ကျော်ကာလအတွင်း ယခုအချိန်အထိ အာဏာပိုင်များဘက်က တနိုင်ငံလုံး အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးအတွက် စာချုပ်နှစ်ခု အဆိုပြုခဲ့သည်။ ပထမတခုကို ၂၀၁၃ နိုဝင်္ဘာလ(၄) ရက်နေ့ တွင် မြစ်ကြီးနား၌ တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်များလက်သို့လွှဲအပ်လိုက် ခြင်းဖြစ်သည်။ ဒုတိယစာချုပ်ကို၂၀၁၄ ဧပြီလ ၅ မှ ၈ရက်ရန်ကုန်အစည်းအဝေး၌ စစ်ခေါင်းဆောင်များက တင်သွင်း ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ယင်းနှစ်ခုကို နိုင်းယှဉ်လေ့လာရာ ဒုတိယ စာချုပ်သည် ပထမမှာထက် တစုံတရာပိုမို တိုးတက်မှုရှိလာ ကြောင်း သိသာသည့် အချက်များကို တွေ့ ရသည်။ မည်သည်တို့ ဖြစ်၍ အဘယ်ကြောင့်ရရှိသနည်း။
ပထမစာချုပ်တွင် (မူကြမ်း) ဟူသောစကားလုံးမပါ။ အဓိပ္ပါယ်မှာ စာချုပ် ကို ပြောင်းလဲမှု စိုးစဉ်းမျှ မပြု စေရဘဲ အာဏာပိုင်များ ပြင်ဆင်ပေးလိုက်သည့်အတိုင်း တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်များက တသဝေ မတိမ်းလက်မှတ်ထိုး ပေး လိုက်ကြရန်ဖြစ်သည်။ ၄င်းအရ စစ်အစိုးရ အာဏာပိုင်များသည် လုံးဝပင်အထက်စီးမှ ဖြစ်သည်။ တဘက်သတ် ဖြစ် သည်။ သဘောထားတင်းမာမှုကို ရာနုန်းပြည့်ပြလိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်။
ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းမှု အနာဂတ်အတွက်၂၀၁၃ နိုဝင်္ဘာလ (၂) ရက်နေ့ တွင် တိုင်းရင်းသား တော်လှန်ရေး အဖွဲ့ အားလုံးနီးပါးတက်သော လိုင်ဇာညီလာခံမှ ချမှတ် လိုက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်များ ကို ကိုင်ကာ မြှော်လင့်တကြီးနှင့် မြစ်ကြီးနားသို့ ချီတက်လာခဲ့ကြခြင်းဖြစ်သည်။ လိုင်ဇာမြို့ အထွက်မှစပြီးမြစ်ကြီးနားရောက်သည်အထိ လမ်းတလျှောက် တွင် တိုင်းရင်းသားပေါင်းစုံ လူထုများက လမ်းပေါ်ထွက်ကာ ခေါင်းဆောင်များအား သောင်းသောင်းဖျဖျ ကြိုဆိုခဲ့ကြ သည်။ မြစ်ကြီးနားမြို့ အ၀င်တွင် လူထုများ ပိတ်ကြပ်မျှ ကြိုဆိုခဲ့ကြသည်။ မြစ်ကြီးနားရောက်ပြီး အမောမျှ မပြေသေး။ ဘာတခုမျှ အကြေအလည် မဆွေးနွေးရသေးမှီ မှာပင် အာ ဏာပိုင် များက ပထမ စာချုပ်ကို လွှဲအပ်လိုက်ခြင်းဖြစ် သည်။ စာချုပ်ကို တချက်ဖတ်ကြည့်ရုံမျှနှင့် အမောဆို့ သွား ကြပါမည်။ “အပစ်အခတ်ရပ်စဲခြင်းကို ခြွင်းချက်မရှိ လက်ခံ ဆောင်ရွက်ပြီး” ဟူသော ဝေါဟာရမှာ စာချုပ်၏ ဦးတည် ချက် ထိပ်ဆုံးပိုင်းတွင်နေရာယူထားလေ၇ာ အဘယ်မျှ တဘက်စီးနင်း ကျလိုက်ပါဘိ သနည်း။
၂၀၁၃ ခုနှစ် နိုဝင်္ဘာလ (၄) ရက်နေ့ မြစ်ကြီးနားအစည်းအဝေးပြီးသည့်အချိန်မှစ၍ နောက်တကြိမ်ဆွေးနွေးပွဲ ထပ်မံကျင်းပသည့်၂၀၁၄ ခုနှစ် ဧပြီလ ၅ ရက် ရန်ကုန်အစည်းအဝေးအထိတွင် အကြား၌ အချိန်အားဖြင့် ငါးလတာ ကြာမြင့်ခဲ့သည်။ ယင်းကာလအတွင်း နောက်တကြိမ်ထိုးမည့် နိင်ငံရေးစစ်ပွဲအတွက် သူ့ ဘက် ကိုယ့်ဘက် ပြင်ဆင်ခဲ့ ကြခြင်းမှာ ထင်ရှားသည်။ သူ့ ဘက် ကိုယ့်ဘက်ဟု ဆိုရာ၌ စစ်အစိုးရ အာဏာပိုင်များ ဘက်တွင်ရှိနေသည့်အပိုင်းကို ရှင်းရှင်းမြင်နိုင်သည်။ တိုင်းရင်းသားတော်လှန်ရေးအဖွဲ့ အစည်းများဘက်တွင်မူလှေနံနှစ် ဘက်နင်းထားသည့် ခေါင်း ဆောင်အချို့ ကို တွေ့ မြင်နေရသည်မှာ စိတ်မချမ်းမြေ့ ဘွယ်ပင်။ သို့ ရာတွင် ၄င်းတို့ ကိုယ် စားပြုသည့် အဖွဲ့ အစည်း နှင့် လူမျိုးအတွင်း၌ ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စု တည်ဆောက်ရေးအခြေခံများ မရမခြင်း စစ် အာဏာရှင်စနစ်ကို ပြတ် ပြတ်သားသား ဆက်လက် ဆန့် ကျင်တိုက်ပွဲဝင်သွားမည့် ခေါင်းဆောင်များ၊ လူထုများရှိနေ သေးသည်ကို တွေ့ ရ သဖြင့် စစ်မှန်သည့် ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် မြှော်လင့်ချက်ကိုမူ စွန့် လွှတ်ရန်မရှိ။
အရပ်သား အသွင်ယူ စစ်အစိုးရယခုအချိန်အထိ ကျင့်သုံးလျှက်ရှိသော မဟာဗျူဟာမှာ ဖြစ်နိုင်လျှင်မည်သည့် တိကျသည့် နိုင်ငံရေးသဘော တူညီချက်ကိုမျှ မထည့်သွင်းဘဲ တနိုင်ငံလုံး အပစ်အခတ်ရပ်စဲေ၇းစာချုပ်အား လက် မှတ်ရေးထိုးကြစေရန်၊ ၂၀၀၈ ဖွဲ့ စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ဘောင်အတွင်းကျင်းပမည့် နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲဟူသည်များအား တွင် အကန့် အသတ်မဲ့ အချိန်ဆွဲကာ စစ်အာဏာရှင်အုပ်ချုပ်မှုသက်တန်းကို ဆွဲဆန့် သွားရန်နှင့် တိုင်းရင်းသား တော်လှန်ရေး အဖွဲ့ အစည်းများအား တဖြည်းဖြည်းလက်နက်ဖြုတ်ခိုင်းရန်တို့ သာဖြစ်သည်။
ငါးလတာ ကာလအတွင်း ဦးသိန်းစိန်အစိုးရသည် ကေအင်ယူခေါင်းဆောင်များအား နေပြည်တော်သို့ထပ်မံ ခေါ်ယူတွေ့ ဆုံသည်။ ၀ ဒေသသို့ အစိုးရကိုယ်စားလှယ်စေလွှတ်ကာ ၀သပ ခေါင်းဆောင်များနှင့် သွားရောက် တွေ့ ဆုံ စေ သည်။ ဗိုလ်ချုပ်ရွာစစ် ခေါင်းဆောင်သည့် ရှမ်းပြည် အက်စ်အက်စ်အေ တောင်ပိုင်းတပ်မတော်ခေါင်းဆောင် များ အား ဦးအောင်မင်းခေါင်း ဆောင်သည့် အစိုးရကိုယ်စားလှယ်များက သွားရောက်တွေ့ ဆုံကြသည်။ မည်သည့်အခါကမျှ တလေးတစား ဆက်ဆန်မှုမပြုခဲ့သော အဖွဲ့ ငယ်ကလေးများအား နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲတွင် ပါဝင်ခွင့်ပြုမည်ဟု ကတိပေး ကာ စည်းရုံးခဲ့သည်။
တဘက်တွင်လည်း မတ်လ၂၇ ရက်တပ်မတော်နေ့ တွင် လက်နက် ကြီးများ၊ သံချပ်ကာကားများ၊ လေယာဉ် များ၊ စစ်ရေးစွမ်းရည်ပြသမှုများကို ယခင်နှစ် များကထက် ပိုမို၍ ထုတ်ပြပြီး စစ်ရေးအင်အားဖြင့် ခြိမ်းခြောက်မှုများပြုခဲ့ သည်။ ကာချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှုးကြီးမင်းအောင်လှို်င် ရှမ်းပြည်သို့ ခရီး ထွက်သော အခါ တပ်မတော်က ဘယ်သူ့ ကိုမှ မကြောက်ဘူးဟု နုတ်မှ ပြောင်ဖွင့်ကာ ထပ်မံခြိမ်းခြောက်ပြန်သည်။ ယင်းတို့ မှာ စစ်အစိုးရ အာဏာပိုင်များ ဘက်မှ အပိုင်းဖြစ်သည်။
ဤငါးလတာကာလတွင် စစ်အာဏာရှင်ဟောင်းသစ်များ၏ယင်းမဟာဗျူဟာကို နားလည်သော တိုင်းရင်းသား အဖွဲ့ အစည်းများ၊ ခေါင်း ဆောင်များသည် အစိုးရဘက်မှပေးပို့ လိုက်သည့်စာချုပ်အား အသေအချာ လေ့လာကြသည်။ မိမိတို့ သက်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့ အစည်း များအလိုက် နိုင်ငံရေးရှုဒေါင့်မှလည်းကောင်း၊ ဥပဒေရှုဒေါင့်မှလည်းကောင်း သုံးသပ် ကြသည်။ မိမိတို့ သိလိုသည့်အရာများအား နီးစပ်ရာပညာရှင်များနှင့်ညှိနိုင်းတိုင်ပင်ကြသည်။ သက်ဆိုင်ရာမိမိတို့ လူထု များထံမှလည်းကောင်း၊ လူထုအသင်းအဖွဲ့ များထံမှလည်းကောင်းအကြံဥာဏ်ရယူခဲ့သည့် အဖွဲ့ တချို့ ပင်ရှိခဲ့ သည်။
အဖွဲ့ အစည်းတခု နှင့် အခြားတခုအကြားတွင် လည်း ညှိနိုင်းမှုများရှိခဲ့သည်။ သဘောထားအမြင်များကို နည်း မျိုးစုံဖြင့် ထုတ်ဖေါ်ခဲ့ကြသည်။ အဖွဲ့ အစည်းအားလုံး ပါဝင်တက်ရောက်ရန်ဦးတည်သည့် လော်ခီးလာ ညီလာခံ တွင် စုရုံးခဲ့ကြသည်။ တိုင်းရင်းသားတော်လှန်ရေးအဖွဲ့ အစည်းများ စုပေါင်းအဆိုပြုသည့် စာချုပ်(မူကြမ်း) တခု ပြုစု နိုင်ခဲ့ သည်။ ဤသည်မှာ သမိုင်းဖြစ်သွား ခဲ့ပါပြီ။ အခြေခံလူထု များကလည်း ငြိမ်းချမ်းရေးပြသနာများအပေါ် စိတ်ဝင်စားမှု တစုံတရာ ပိုမိုပြ လာကြသည်။ တိုင်းရင်းသား ခေါင်းဆောင်များ နှင့် တွေ့ ဆုံခွင့်ရသည့်ဆွေးနွေးပွဲများတွင် မေးခွန်းများ ပို၍မေးလာကြ၊ ကန့် ကွက် ထောက်ခံဆွေးနွေးမှုများ ပို၍ပြုလာကြသည်။ သတင်း မီဒီယာများ တွင် ငြိမ်းချမ်းရေး လှုပ်ရှားမှု နှင့်စပ်လျှဉ်းသည့် ဖေါ်ပြမှုများ၊ ဆွေးနွေးခန်းများ၊ ထုတ်ပြန်ကြေငြာ ချက်များ၊ အင်တာဗျူးများ ဆက်တိုက်ဆို သလို ပင်ပါလာခဲ့သည်။
အပစ်ရပ်ရေးသက်သက်ကိုသာ အာဏာပိုင်များက အဓိကထားဖေါ်ဆောင်နေသော်လည်း တိုင်းရင်း သား တော်လှန်ရေးအဖွဲ့ အစည်းများကမူ တနိုင်ငံလုံးအပစ်ရပ်စာချုပ် ခိုင်မာရေးအတွက် စစ်ရေးအရ ထိန်းကြောင်းရန် လို အပ်ချက်များအပြင် အရင်းခံကျသည့် နိုင်ငံရေးသဘောတူညီချက်အချို့ ကိုပါ တပါတည်း ထည့်သွင်းချုပ်ဆိုနိုင်ရေး ကြိုးပမ်းလာမှုအပေါ် နိုင်ငံတကာ(အထူးသဖြင့် ကုလသမဂ္ဂ၊ တရုတ်နှင့် အမေရိကန် နိုင်ငံတို့ ) ၏ စိတ်ဝင်စားမှုမှာ အဆိုပါ ငါးလတာ ကာလအတွင်း သိသာစွာ မြင့်တက်လာခဲ့သည်။
အထက်ဖေါ်ပြပါအချက်အလက်များအားလုံးသည် စစ်အစိုးရနှင့် ကာချုပ်မင်းအောင်လှိုင်တို့ အပေါ် ဖိအားများ ဖြစ်စေခဲ့သည်။ သို့ ဖြင့်အာဏာပိုင်များအဆိုပြု ဒုတိယစာချုပ်အပေါ် သက်ရောက်မှုများရှိခဲ့သည်။
(၁) ပထမစာချုပ်တွင် (မူကြမ်း) ဟူသောစကားလုံးမပါသော်လည်း ဒုတိယစာချုပ်တွင် (မူကြမ်း) ဟူသည်ကို ထည့်သွင်းဖေါ်ပြလာရသည်။ ထို့ အပြင်နှစ်ဘက်ကိုယ်စားလည် များဖြင့် ပူးပေါင်း ကော်မတီ တရပ်ဖွဲ့ ၍ နှစ်ဘက်လက် ခံနိုင်မည့် စာချုပ်မူကြမ်းတခုရေးဆွဲရန်ပင် လက်ခံဆွေးနွေး လာ ရသည်။
(၂) ပထမတွင် နိုင်ငံတော်၏ တာဝန်၊ အပစ်ရပ်တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့ များ၏တာဝန်၊ နှစ်ဘက် လိုက်နာရမည့် တာဝန်ဟူ၍ သုံးပိုင်းခွဲထားသည်။ ၄င်းအရ အစိုးရဘက်က တာဝန်များလျှော့ယူထားပြီး တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့ များအပေါ် မတရားဖိနှိပ်ထားသည့် အချက်များဖေါ်ပြထားသည်။ ဒုတိယတွင် ယင်းသို့ အခန်းခွဲပုံလုံးဝပြောင်းသွားသည်။ စာချုပ် တခုလုံး၌ အစိုးရရော တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့ များ ဘက်ကပါ တန်းတူလိုက်နာရမည့်အချက်များကိုသာ ဖေါ်ပြလာသည်။
(၃) ပထမတွင် အာဏာပိုင်များသည်မိမိတို့ ကိုယ်ကို “န်ိုင်ငံတော်” ဟူ၍ သုံးခဲ့ခြင်းဖြင့် အထက်စီးမှာ နေရာယူ ထားခဲ့သည်။ ဒုတိယစာချုပ်တွင်မူ “မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရ” ဟူသော ဝေါဟာရ သို့ ပြောင်းသွားသည်။ တန်းတူရေးနှင့် ပို၍ နီးစပ်လာသည်။
(၄) ပထမ စာမျက်နှာ (၁)တွင် ပါရှိသည့် “တည်ဆဲ ဥပဒေနှင့်မဆန့် ကျင်သည့် သဘော တူညီချက်များအား” ဟူသော ဝေါဟာရအား ဒုတိယ တွင် ထပ်မံမဖေါ်ပြတော့။ ချန်လှပ်ထားခဲ့ကြောင်း တွေ့ ရသည်။
(၅)ပထမ စာမျက်နှာ (၂) တွင် “လက်နက်ကိုင်လမ်းစဉ်ကို စွန့် လွှတ်ရန်နှင့် အတိတ် ဖြစ်ရပ်များအပေါ် တဦး နှင့် တဦး အပြစ်မတင်ဘဲ ---- ” ဟူသည့် ဖေါ်ပြချက်ကို ဒုတိယ စာချုပ်တွင် မတွေ့ ရတော့။
(၆) ပထမ တွင် “အပစ်အခတ်ရပ်စဲခြင်းကို ခြွင်းချက်မရှိ လက်ခံ ဆောင်ရွက်ပြီး” ဟူ၍ ဖေါ်ပြထားသော ဝေါဟာရမှာ ဒုတိယ၌ ပျောက်ကွယ်သွားသည်။
(၇) ပထမ တွင် ဦးတည်ချက်သုံးရပ်လုံးသည် အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးနှင့်သာ သက်ဆိုင်သည်။ ဒုတိယ တွင်မူ နိုင်ငံရေးရည်မှန်းချက်ပါလာသည်။
(၈) ပထမအပိုဒ် ၃(ဇ)ပါ“လက်နက်ကိုင် တိုင်းရင်းသား အဖွဲ့အစည်းများက တပ်မတော်တပ်စခန်း များ အား မည်သည့်အကြောင်းပြချက်နှင့်မျှ တိုက်ခိုက်ခြင်း မပြုလုပ်ရန်။” ဟူသည့် မတရားကန့်သတ်ချက် မပါတော့ပေ။
(၉) ပထမ အပိုဒ် ၄(ဃ) တွင် “ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပါ နိုင်ငံတော်ကာကွယ်ရေးနှင့် သက်ဆိုင်သော ပြဌာန်းချက် များ ကို လေးစားလိုက်နာရန်” ဟူ၍ ပါရှိခဲ့သည်။ ၂၀၀၈ အခြေခံဥပဒေ အပိုဒ် - ၃၃၈ အရ “နိုင်ငံတော်အတွင်းရှိ လက် နက်ကိုင်အဖွဲ့ အစည်းအားလုံးသည် တပ်မတော်၏ ကွပ်ကဲမှုအောက်တွင်ရှိရမည်။” ဟူ၍လည်းကောင်း၊ ပုဒ်မ ၂၀ (ဂ) အရ “တပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်သည် လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ အားလုံး၏ အကြီးအကဲဖြစ်သည်။” ဟူ၍လည်း ကောင်း၊ တစ်ခုတည်းသောလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ကြောင်း ပြဌာန်းထား သည်။ ယင်းပြဌာန်းချက်ကို သာလက်ခံရမည် ဆိုလျှင် တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့များ လက်နက်ချရ မည့် သဘောသက် ရောက်သည်။ ဒုတိယတွင်မူ ယင်းကဲ့သို့ ပြဌာန်းချက်မျိုး မပါရှိတော့ပေ။
(၁၀) ပထမ အပိုဒ် ၂(ဂ) တွင် “အပစ်ရပ်နယ်မြေအတွင်း တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအတွက် မြန်မာနိုင်ငံရဲ တပ်ဖွဲ့ က တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ရန်” ဟု ပါရှိသည်။ ဒုတိယ စာချုပ်တွင်မူ ရဲကဏ္ဍ မပါရှိတော့ပေ။ ၄င်းအစား “အပစ်ရပ်နယ်မြေအတွင်း တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကိစ္စကို ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရန်နှင့် ပြစ်မှု ကျူးလွန်သူများ ကို တည်ဆဲဥပဒေနှင့်အညီ တရားစွဲဆို အရေးယူရန်။” ဟူသည်ကို အစားထိုးလာသည်။
(၁၁) ပထမအပိုဒ် ၂၁ တွင် “မတရားအသင်းအက်ဥပဒေအရ အရေးယူခံရသူများအပေါ် ဖြေလျှော့ ပေး ရေး ဆောင်ရွက်ပေးရန်” ဟုသာ ပြဌာန်းထားသည်။ ဒုတိယစာချုပ် အပိုဒ် ၁၉ တွင်မူ “လက်နက်ကိုင်တိုင်းရင်းသား အဖွဲ့ များအား မတရားအသင်းအဖြစ် ကြေညာထားခြင်း မှ ပယ်ဖျက်ရန်” ဟု ပါရှိလာသဖြင့် တဆစ်ချိုးပြောင်းလဲသွား ကြောင်း တွေ့ နိုင်သည်။ တိုင်းရင်းသားတော်လှန်ရေးအဖွဲ့ များသည် တရားဝင်ရပ်တည်ခွင့်ရလာနိုင်မည့် လမ်းကြောင်း ကို စတင်တွေ့ မြင်နေရပြီဖြစ်သည်။
ဤသို့ တိုးတက်ပြောင်းလဲမှုများရရှိလာခြင်းမှာ စစ်ခေါင်းဆောင် ဟောင်း သစ်များ ကိုယ်တိုင်က သဘောထား ကောင်းစွာနှင့် ၄င်းတို့ ဘာသာပြောင်းလဲတင်သွင်းလာခြင်းမဟုတ်။ အထက်စာမျက်နှာများတွင် ဖေါ်ပြထားသည့် အခြေ အနေများနောက်ခံတွင် ဆွေးနွေးပွဲတက်ရောက်ခွင့်ရကြသည့် တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်များကဥပဒေကြောင်းအခြေခံ များမှနေ၍ ပိုမိုဆွေးနွေးနိုင်လာကြခြင်းကြောင့်လည်းကောင်း၊ ဆွေးနွေးပွဲပြင်ပတွင်လည်းဥပဒေရေးရာ လှုပ်ရှားမှု ၊ လူထု လှုပ်ရှားမှုတစုံ တရာပေါ်ပေါက်လာခြင်းကြောင့်လည်းကောင်း ဖြစ်သည်။
“လက်နက်ကိုင်တိုင်းရင်းသား အဖွဲ့ များအား မတရားအသင်းအဖြစ် ကြေညာထားခြင်း မှ ပယ်ဖျက်ရန်” ဟူသောအချက်ကို မြန်မာ့တပ်မတော်ကိုယ်တိုင်က သဘောတူကြောင်းဖြင့် အဆိုပြုချက်တင်သွင်းလာခြင်းမှာ ထူးခြား ချက်ဖြစ်သည်။ ယင်းအတွက်မြန်မာ့တပ်မတော် စစ်ခေါင်းဆောင်များကို အသိအမှတ်ပြုရပါမည်။ သို့ ရာတွင် မတရား အသင်းများ အဖြစ် ဆက်လက်ထားရှိလျှင် စာချုပ်၏ ဘက်တဘက်မှာ တရားမ၀င်ဖြစ်နေသည့်အတွက်ကြောင့်သာ တရားဝင်စာချုပ်ဖြစ်စေရေးအတွက် မလွှဲသာ မရှောင်သာ အသိအမှတ်ပြုရခြင်းမျိုး မဖြစ်သင့်ပါ။ ၄င်းတို့ အား တကယ့် တရားဝင် အသင်းအဖွဲ့ များဖြစ်လာအောင် လုပ်ပေးရန် တာဝန်ရှိပါသည်။
မတရားအသင်းအဖြစ်မှ ပယ်ဖျက်ကြောင်း ကြေငြာရုံနှင့်မူ တရားဝင်အသင်းများဖြစ်လာပြီ ဟု ဥပဒေကြောင်း အရ အတိအကျ ပြောရန် အခက်အခဲရှိနေဆဲဖြစ်သည်။ ယင်းသို့ လိပ်ခဲတင်းလင်း မထားသင့်ပါ။ ၄င်းတို့ အား၂၀၁၀ ခုနှစ် နိုင်ငံရေးပါတီများ မှတ်ပုံတင်ခြင်း ဆိုင်ရာ ဥပဒေအရ မဟုတ်ဘဲ ၁၉၈၈ ခုနှစ် အသင်းအဖွဲ့ များမှတ်ပုံတင်ခြင်း ဆိုင်ရာ ဥပဒေအရ မှတ်ပုံတင်ခွင့်ပေးနိုင်သည်။ တနိုင်ငံလုံး အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး စာချုပ် ကို လက်မှတ်ရေးထိုးကြ ပြီးနောက် (၁၄) ရက်အတွင်းတွင် အဆိုပါဥပဒေများနှင့် အညီ တိုင်းရင်းသားတော်လှန်ရေး အဖွဲ့ များ တရားဝင်ဖြစ် စေရန် ဆောင်ရွက်ပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း စာချုပ်တွင်ထည့်သွင်းချုပ်ဆိုနိုင်သည်။ ဤအတိုင်းပင် ဆီအာရာလီယွန်း နိုင်ငံတွင် ဆောင်ရွက်ပြီး ငြိမ်းချမ်းရေး ရယူခဲ့ကြသည်။ ယင်းသို့ ဖြစ်လျှင် အစိုးရအာဏာပိုင်များ၊ မြန်မာ့တပ်မတော် စစ်ခေါင်းဆောင်များ၊ အနေဖြင့် ငြိမ်းချမ်းရေးပြသနာကို ဥပဒေစိုးမိုးရေးအခြေခံမှ မှန်ကန်စွာချဉ်းကပ်သည့် လမ်းပေါ် စတင်လျှောက်လှမ်းလိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်း ထင်ရှားသည့် သာဓက ပြလိုက်ရာရောက်သည်။
ယင်းနှင့် ဆန့် ကျင်ပြီး တိုင်းရင်းသား တော်လှန်ရေးအဖွဲ့ အစည်းများအား မတရားအသင်းများအဖြစ် ဆက် လက်ထားရှိ၊ တရားဝင်အသင်းများဖြစ်အောင် လုပ်ဆောင်ပေးခြင်းမရှိပါက မည်သည့်ဘက်သည် တကယ်တန်း တရား ၀င်မှုရှိသနည်း၊ လူသားဖြစ်မှုကို ဆန့် ကျင်သည့်ပြစ်မှု၊ စစ်ရာဇ၀တ်မှု၊ လူမျိုးတုံး သတ်ဖြတ်မှုများဖြင့် နိုင်ငံတကာ၏ စွပ်စွဲမှုကို ယနေ့ အချိန်အထိ ခံထားရဆဲဖြစ်သော မြန်မာ့တပ်မတော်က တရားဝင်သလား။ နိုင်ငံတကာ၏ ယင်းကဲ့ သို့ စွပ်စွဲမှုကို စိုးစဉ်းမျှ မခံရဘဲ အမျိုးသားရေးအတွက် ရိုးသားစွာခုခံစစ်ဆင်နွှဲလျှက် ရှိသော တိုင်းရင်းသား တော်လှန် ရေးအဖွဲ့ အစည်းများက တရားဝင်သလား ဟူ၍ ပြည်တွင်းနှင့် နိုင်ငံတကာတွင် လှုပ်ရှားမှုများပေါ်ပေါက်လာလျှင် ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် အဟန့် အတားဖြစ်နိုင်ပါသည်။ မကောင်းပါ။
မြန်မာ့တပ်မတော်က အဆိုပြုသည့် ဒုတိယ စာချုပ် အခန်း (၁) အပုဒ် (၁) (ဈ) တွင် “ငြိမ်းချမ်းရေး လုပ်ငန်း စဉ်များအား ပွင့်လင်းမြင်သာသော နည်းလမ်းများဖြင့် အကောင်အထည်ဖေါ်ရန်” ဟု ပါရှိသော်လည်း လျှို့ ဝှက် ဟူ သော စကားလုံးကို အဆိုပါ စာချုပ်၏ စာမျက်နှာတိုင်း၌ ဖေါ်ပြထားခြင်းမှာ မသင့်လျော်ပါ။ ငြိမ်းချမ်းရေး အတွက် စိုးရိမ်ပူပန်ကာ တတ်နိုင်သမျှ အကြံဥာဏ်ကလေးများပေး၊ သဘောထားများ ထုတ်ဖေါ်ခွင့်ရလိုကြသော လူထုကြီး တရပ်လုံးအပေါ် အဆိုပါ စာချုပ်မူကြမ်းများအား လျှို့ ဝှက်မထားဘဲ ချပြ၊ အကြံဥာဏ်တောင်းခြင်းများ လုပ်မည် ဆိုပါက များစွာဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာ ဖြစ်ကြမည် ဖြစ်ကြောင်းကို စစ်ခေါင်းဆောင်များ စဉ်းစားသင့်ပါပြီ။
Founder of Legal Aid Network (LAN) မေလ (၂၇) ရက် ၂၀၁၄ ခုနှစ်
at 5/27/2014 07:51:00 AM
Ningbaw gaw Kachin,
Hti n dang hkrumra zuphpawng,
Chiangmaielaw malawng.
Hkrum hpawng shagu sumtsan mu,
Yawng myit hkrum sai mahtai lu;
Bai bra aten masin kawp,
Htun bang mat ai dai lapawp.
Kangka sadi n dung ai,
Shi bai ahpyawp kau hkraihkrai;
Ajagumhpraw aten ma,
Hpyanghpyang sai wa malala.
UNFC amyit hkrum,
Panglai htawk dang kau na dum;
Tsadan dai hpe nachying hkrit,
Jahten sharun tingnyang htit.
Hpunau woihkyi shawng myit shut,
Gumdin lam hpe woi ginlut;
Kachin shi hkrai ngam nu ga,
Manang ni hpe woi anya.
Tsadanwa hpe woi kamhpa,
Na prauprau hkra zinlum da;
Kachin hpe jawm adawt na,
Tai hpe shagang shakang ya.
I kyu hpyi ai ding-yang rai,
Minit sekkant n hprai ai;
Awng Padang wa Hkye Madu,
Nang chyu lit la ya sanu.
I hpe myiman hkum gayin,
I hpyi ai ga hkum na jin;
Shadan shadawng Hpngshingkang,
Kachin hpe she Nang jai lang............